Soavimasoandro: soloina ny fantson-drano mirefy 1 500 metatra | NewsMada
Soavimasoandro: soloina ny fantson-drano mirefy 1 500 metatra
Mitohy eny Soavimasoandro ny fanoloana ny fantson-dranon’ny Jirama. Voakasik’izany ny fantsona tranainy sy manary rano. Tohin’ny fanatsarana ny famatsian-drano atao eto Antananarivo Renivohitra sy ny manodidina izao atao izao. Tetikasa iarahana amin’ny orinasa afrikanina tatsimo TRG International. Efa natao ny teny Ilanivato, nanoloana fantson-drano mirefy 1,05 km. Miisa 166 ny fitarihan-drano nosoloina fantsona vaovao. Toraka izany koa ny eny Androndrakely, nosoloina ny fantson-drano mirefy 820 metatra, namindrana fitarihan-drano miisa 49.
Mirefy 1 498 metatra ny fantsona havaozina eny Soavimasoandro amin’izao asa atao izao. Efa vita ny 572 metatra ary miisa 47 ny fitarihan-drano efa nafindra. Efa mihatsara amin’izao fotoana izao ny tosiky ny rano eny Soavimasoandro sy ny manodidina.
Mitotaly 90 km ny fantson-drano tranainy sy manary rano hosoloina ao anatin’ity tetikasa ity, ka kendrena hovitaina amin’izao dingana voalohany izao ny 10 km. Tanjona ny hanatsarana ny famatsian-drano, manoloana ny tsy fahampian’ny famokarana sy ny fitsinjarana ny rano. Marihina koa fa efa mandeha ny fanitarana toby famokarana rano eny Mandroseza, hampitomboana ny famatsiana eto Antananarivo sy ny manodidina.
Ahena faran’izay kely indrindra koa ny fanamboarana ny fantsona vaky, izay sady manimba ny arabe. Hamafisina koa ny fanaraha-maso sy ny fitsirihana ny fampidiran-drano tsy ara-dalàna.